Tababare Ole Gunnar Solskjaer oo si rasmi ah loogu magacaabay Tababaraha Man United… – Hagaag.com
Tababare Ole Gunnar Solskjaer oo si rasmi ah loogu magacaabay Tababaraha Man United…
Posted on 28 Maarso 2019 by Admin in Sports // 0 Comments
Manchester United ayaa si rasmi ah ugu magacawday Ole Gunnar Solskjaer inuu noqdo tababaraha kooxda qandaraas seddax sano ah, sida naadiga uu sheegay maanta oo Khamis ah.
46 jirkaan reer Norway ayaa United ku hogaamiyay 14 kulan oo guul ah tartamada 19 kulan tan iyo markii uu bedelay Jose Mourinho bishii December.
“Maalintii ugu horreysay ee aan imid, waxaan dareemay gurigeyga kooxdaan gaarka ii ah,” ayuu yiri Solskjaer sida lagu sheegay website ka United. “Sharaf ayay ii aheyd inaan noqdo ciyaaryahan Manchester United ah, ka dibna waxaan ku bilaabayaa xirfadeyda tababarka halkan.
“Tani waa shaqada aan mar walba ku riyoon jiray inaan sameeyo, waana ku faraxsanahay inaan fursad u helo inaan hogaamiyo kooxda waqtiga dheer, waxaan rajeynayaa inaan sii badino guulaha taageerayaasheena cajiibka ah ay istaahilaan.”
United ayaa badisay 10 ka mid ah 13kii kulan ee Premier League inta uu hogaaminayey Solskjaer, waxaana ay gaareen wareega 8da ee Champions League iyagoo guulo waaweyn ka gaaray kooxda hogaamisa horyaalka France ee Paris St Germain.
Dhowr xubno oo ka tirsan kooxda koowaad, oo uu ku jiro saxiixa rikoorka Paul Pogba, ayaa ammaanay Solskjaer inuu dib u soo celiyey kalsoonida iyo xorriyadda kooxda oo ay ka maqneyd intii uu joogay Mourinho kooxda.
Ole waxa uu soo bandhigay khibrad weyn, oo ah ciyaaryahan ahaan iyo tababare ahaanba, isagoo raaciyay rabitaan ah inuu ciyaartoy da ‘yar siiyo fursado iyo fahamka qotada dheer ee dhaqanka kooxda, “Ed Woodward, Gudoomiye ku xigeenka fulinta United ayaa yiri.
Manchester United oo kaalinta 5aad ku jirta, ayaa qoorta iskula jiraan kooxaha Arsenal Chelsea iyo Tottenham u soo bixida tartanka Champions League soo socda, United waxay marti gelineysaa maalinta Sabtiga kooxda Watford ee tartanka Premier League.